Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo ka qayb galay Xaflada qalin jabinta Dufcada 8aad ee Jaamacada Kismaayo – Radio Daljir
Febraayo 2, 2018 7:53 g 0
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta ka qayb galay Xaflad ay ku qalin jabinayeen Dufcadii 8aad ee ka qalin jabisa Jaamacada Kismaayo.
Ardaydan oo ka qalinjabiyay kuliyadaha kala duwan ee Jaamacada waxaa ay in mudo ah ku jireen halgan waxbarasho oo wakhti dheer soo qaatay.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya ayaa Khudbad u jeediyay ardayda isagoo diirada ku saaray marxaladaha waxbarashada dalka guud ahaan iyo fursadaha jira.
Mudane Axmed Maxamed Islaam wuxuu sheegay in Jaamacada Kismaayo ay soo martay wakhtiyo kala duwan isla markana ay tahay Hooyada Jubbaland maadama ay marti galisay shirkii ugu horeeyay ee Jubbaland lagu dhisay.
Madaxweynahu wuxuu xusay in Jaamacadan ay tahay mida ugu wanaagsan ee guud ahaan Gobolka isla markana ay kaga faa’iidaysan doonan in shaqo abuur loo sameeyo Ardayda ka qalinjabisa.
Wuxuu hoosta ka xariiqay in ay Jubbaland mudnanta koobad siinayso dadka dalka gudahiisa wax ku bartay marka laga hadlayo fursadaha shaqo si aysan dhalinyaradu dalkooda uga haajirin.
“Maanta waxaan rabaa in aan idiin sheego Jaamacadaha dalka gudahiisu waxay soo saaran jiil ku haboon in ay qabtaan shaqooyinka gudaha halkii dad dibadaha ka yimid la shaqaalaysiin lahaa” ayuu yiri Madaxweynahu.
Maamulka Jaamacada ayuu Madaxweynahu sheegay in ay ka sugayaan sidii loo gaba gabayn lahaa in Jaamacadu ay noqoto mid heer deegaan ah oo Jubbaland ay gacanta ku hayso isla markana dadka ka qalin jabiya loo qaato shaqaalaha Dowlada.
Waxbarashada dalka ayuu sheegay Madaxweynahu in ay soo wanaagsananayso isla markana ay rajo badan ka qabaan in ay tayada waxbarashadu noqoto sidii ay ahayd wakhtiyadii bari samaadka.
Waalidiinta iyo dhamaan dadkii gacanta ka gaystay in Ardaydan ay halkan soo gaaran ayuu Madaxweynahu u mahadceliyay isagoo ku booriyay in ay dadaalkooda sii wadaan.